Tirada Dhimashada Cudurka Coronavirus ee Caalamka oo kor u dhaaftay boqol kun oo ruux - Jowhar Somali Leader
Home News Tirada Dhimashada Cudurka Coronavirus ee Caalamka oo kor u dhaaftay boqol kun...
Tirada Dhimashada Cudurka Coronavirus ee Caalamka oo kor u dhaaftay boqol kun oo ruux
Tirada dadka u geeriyooday cudurka Coronoviras ee caalamka ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo ruux iyadoo 1.6 malyana ay qabaan cudurka halka 368,000 oo ruux ay ka bogsadeen sida laga soo xigtey Jaamacada Johns Hopkins University .
Dalka Talyaaniga ayaa laga diiwaangeliyay tirada ugu badan ee u geeriyootay cudurkan iyadoo ay u dhinteen dad ka badan 18,000 oo ruux halka Maraykankana uu yahay dalka ugu badan ee dadka uu soo ritey cudurka ay ku nool yihiin.
Hase yeeshee halka ugu badan ee dalka Maraykanka ee cudurkan saameeyey ee ah New York ayaa hoos u dhac laga dareemay markii ugu horeysay maanta.
Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte, ayaa sheegay inuu gaaray go’aan adag oo ah in la sii kordhiyo waqtiga bandowga ah ee lagu soo rogay dalkaas.
Dalka Spain oo ka mid ah wadamada ugu daran ee caalamka ee ku fidey cudurkan ayaa qorsheynaya in dadka loo qeybiyo qalabka wajiga lagu xirto.
Dalka Faransiiska ayaa xaqiijiyay in ay 24kii saacadood ee ugu dambeeyay ay u geeriyoodeen cudurka Covid-19 dad gaaray 987 ruux iyadoo tirada dhimashadana ay gaartay 13,197 oo ruux.
Dalka Turkiga ayaa tirada ugu geeriyootay cudurkan waxaa ay kor u dhaaftay kun ruux iyadoo 24kii saac ee ugu dambeeyay ay u dhinteen dad ku dhow boqol ruux.
Wasiirka caafimaadka Turkiga ayaa sheegay in tirada ka bogsootay cudurkan ay gaartay 2,423 ruux iyadoo 24kii saacadood ee ugu dambeysay ay ka reysteen dad gaaray 281 ruux. Guud ahaan dalka Turkiga ayaa laga helay cudurkan dad gaaraya 47,029 oo ruux .
Tirada dhimashada dalka Ingiriiska ayaa sare ugu kacday illaa 980 ruux 24kii saacadood ee la soo dhaafay iyadoo gaartay 8,958 ruux.
Ra’iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo cudurkan isbitaal jiifiyay ayaa bilaabay inuu socdo maanta sida laga soo xigtey xafiiska ra’iisul wasaaraha. Johnson ayaa laga soo saaray qeybta gargaarka deg-degga ah kadib saddex habeen uu ku jirey.